Rohtos Suoja hangover amaphilisi okuvimbela ekuthengisweni ku-inthanethi, ukuthumela emhlabeni wonke | Metropolitan.fi
Rohtos Suoja hangover amaphilisi okuvimbela ekuthengisweni ku-inthanethi, ukuthumela emhlabeni wonke
I-Rohtos Labs yinkampani eklanyelwe nokukhiqiza izithako zokudla. Omunye wemikhiqizo inkampani ethi iyenzile ivele yile mpilo ukuze i-hangover.
Ngaphambilini kutholakala kuphela eFinland amaphilisi e-Rohtos Suoja manje ayatholakala emhlabeni wonke ngokusebenzisa isitolo se-inthanethi yenkampani.
Isekelwe edolobheni elisenyakatho ye-Oulu, eFinland - iRohtos Labs isekela imikhiqizo yawo ekuqondeni kwamuva kwezinto eziphilayo kanye nemithi yamakhemikhali. Inkampani eyimfihlo iphinde isebenze eduze neYunivesithi yase-Oulu.
I-Rohtos Labs yakha imikhiqizo eyenziwe izithako zemvelo. Ngokuhlanganisa isayensi yesimanje kanye nokucwaninga kwamanje yendabuko yase-Asia (i-Ayervedic, i-TCM), inkampani iklami imikhiqizo ngezimo eziningana. Bonke bahlanganyela umqondo wokulinganisa imithi yomzimba ngokusebenzisa izakhi ezithile.
Into eyinhloko ye-hangover yi-acetaldehyde
Ngo-June 2017 inkampani yamemezela ukuthi ingumkhiqizo wabasebenzisi bokuphuza utshwala. Umkhiqizo wakhiwe ngokuthi ukuxiliswa kokwephuza utshwala kuveza ikhemikhali ebizwa nge-acetaldehyde. Le ngxube ekhokhisa umzimba ngaphezu kwe-ethanol (ukuphuza utshwala) futhi yisona sizathu esiyinhloko sokuphuza utshwala emva kokuphuza utshwala.
Isibindi sikhiqiza i-glutathione ukuze ihlukumeze i-acetaldehyde, kodwa ukutholakala kwemvelo kwesibindi kuphuma ngemuva kwamayunithi amabili otshwala. Lokhu kuholela emzimbeni ogcwele i-acetaldehyde. Amaphilisi amaningi e-Rohtos Suoja ahlose ukubuyisela le mali. Umkhiqizo kumele udliwe ngaphambi kokuphuza utshwala futhi akuyona ikhambi le-hangover.
Lokhu kwenziwa ngokuhlanganiswa kwezithako zokuthuthukisa ukukhiqizwa kwemvelo kwe-glutathione. Ama-antioxidants namavithamini ayengezwa ukubuyisela ezinye ukungalingani kwamakhemikhali ezenzeka lapho kudla ngokweqile utshwala.
U-Rohtos Suoja okwamanje ufunda izifundo zesayensi eziyimpumputhe ukuze afake izinzuzo zomkhiqizo. Abasebenzisi be-supplement supplement baye babika ukunciphisa imiphumela ye-hangover phakathi kuka-70-75% ngemuva kokusebenzisa kakhulu utshwala.
Ukuhlolwa kwezinsuku ezingu-7 okulandelelanayo kokuphuza okulandelanayo ku-Tuska Festival ngo-2017 ukusetshenziswa kukaRohtos Suoja kwaholela ekunciphiseni okuphawulekayo kwezimpawu zokucindezeleka emva kokuphuza. Ukudla i-pizza kanye nokunye ukudla okusheshayo ekuseni emva kwalokho kwancishisiwe. Ngakho-ke i-weightloss nokuthuthukiswa kokuzihlonipha kungase kube nemiphumela emihle yabasebenzisi abasebenzisi besikhathi eside.
Ukondla okwanele kwamanzi kuyisici esibalulekile ekunciphiseni ukukhathala ngokomzimba okubangelwa ukuphuza utshwala. I-Ethanol igcoba umzimba. Ukuphuza amanzi phakathi kweziphuzo nokulala ngaphambi kokulala kunconywa kakhulu ukunciphisa imiphumela ye-hangover.
Thenga Rohtos Suoja online, ukuthumela emhlabeni jikelele
U-Rohtos Suoja uchazwa njengengxenye yokondla ethi "Uvikela ubuchopho nomzimba ngenkathi uphuza utshwala futhi kunciphisa lokho okuthiwa i-hangover ngosuku olulandelayo."
Imikhiqizo yayitholakala kuphela eFinland, kodwa kusukela ngoJanuwari 2018 uRohtos Suoja kanye neminye imikhiqizo manje itholakale ukuthengwa kwe-inthanethi emhlabeni jikelele e-Afrika, e-Asia, e-Australia, eYurophu, eNyakatho Melika, eNingizimu Melika.
Umkhiqizo ufika ezinyunithi zamaphilisi angu-30, okwanele izikhathi ezingu-10-15 zokuphuza kuye ngokulinganisa. Intengo yeyunithi € 23.90 (eseduze no- $ 30) kanye nokuthunyelwa. Ukukhokha kungenziwa ngekhadi lesikweletu le-Visa, MasterCard ne-American Express noma nge-Paypal.
I-Rohtos Labs inikeza imikhiqizo yayo isiqinisekiso sokubuyisela imali - abasebenzisi abanganelisekile bangabuyisa ama-capsules angasetshenziswanga ukubuyiselwa imali egcwele. Imiyalo ingenziwa esitolo senkampani esemthethweni esitolo se-intanethi ku-rohtoslabs.com
URohtos Suoja ungumkhiqizo wemvelo owasungulwa futhi wakhiqizwa eFinland, izwe eliseNyakatho Yurophu. Incazelo yomkhiqizo ibhala izithako zemvelo ezilandelayo ezisetshenziselwa umkhiqizo (umthamo wama-capsules amathathu):
I-N-acetyl cysteine: 330 mg
Ukukhipha ubisi lwe-thistle: 165 mg
I-Taurine: 165 mg
I-Quercetin: 165 mg
I-Magnesium (i-citrate): 165 mg
I-piperine: 10 mg
I-Selenium: 0.07 mg
« URohtos Suoja iipilisi zokuthintela i-hangover ekuthengiseni i-intanethi, ukuthumela umhlaba jikelele - Το Karaoke Bar του Kimi Räikkönen είναι ένα hotspot για διασημότητες στο Ελσίνκι »